1xBet लगइन र दर्ता प्रक्रिया - एक चरण-दर-चरण गाइड - FIRST LOGIN BET
1xBet लगइन र दर्ता प्रक्रिया
1xBet संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय बुकमेकरहरू मध्ये एक हो। यो 2007 मा स्थापित भएको थियो, र यसले एक अद्वितीय गेमिङ र खेल सट्टेबाजी अनुभव प्रदान गर्दछ असंख्य बजारहरूको लागि धन्यवाद जसले तपाईंलाई शर्त गर्न दिन्छ। यस बुकमेकरसँग पोकर, बिंगो, लाइभ खेलहरू, र थप जस्ता अन्य उत्पादनहरूसँग धेरै लोकप्रिय क्यासिनो खेलहरू छन्।
यदि तपाइँ एक बुकमेकर खोज्दै हुनुहुन्छ जसले निक्षेप र निकासीको लागि एक विश्वसनीय भुक्तानी प्रणाली प्रदान गर्दछ, 1xBet तपाइँको लागि एक हो। Bettors ले यसलाई एन्ड्रोइड र आईओएस उपकरणहरूबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छ यसको भरपर्दो मोबाइल अनुप्रयोगको लागि धन्यवाद।
यद्यपि, तपाईंले यसका सबै फाइदाहरूको मजा लिनु अघि दर्ता गर्नुपर्छ र सट्टेबाजी सुरु गर्नुपर्छ। यो लेख धेरै 1xBet लगइन र दर्ता विकल्प चरण-दर-चरण वर्णन गर्दछ। सौभाग्यवश, ती सबै महत्त्वपूर्ण रूपमा छिटो र पूरा गर्न सजिलो छन् – यी कामहरू मध्ये एउटा काम गर्ने देशहरूमा नबस्नेहरूका लागि पनि।
VPN प्रयोग गरेर 1xBet मा दर्ता गर्दै
VPN प्रयोग गर्नु एक द्रुत र सजिलो विधि हो जसले तपाइँको दर्ता बिना कुनै हिचको बन्द हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ, यदि तपाइँलाई आवश्यक रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छैन भने पनि। जतिसक्दो चाँडो खेल्न सुरु गर्न तपाईंले पालना गर्नुपर्ने चरणहरू यहाँ छन्:
पहिलो चरण - VPN डाउनलोड गर्नुहोस्
धेरै मानिसहरूलाई 1xBet आधिकारिक वेबसाइटमा लग इन गर्न VPN चाहिन्छ, त्यसैले तपाईंले एउटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपलब्ध केही नि:शुल्क विकल्पहरू SurfShark र ExpressVPN हुन्।
तपाइँलाई साइट पहुँच गर्न को लागी एक आवश्यक कारण यो धेरै देशहरुमा अवरुद्ध छ। एक VPN ले इष्टतम पहुँच प्रदान गर्दछ जबकि तपाईंलाई जियो-ब्लक बाइपास गर्न अनुमति दिन्छ जसले तपाईंलाई जहाँ भए पनि व्यक्तिगत खाता खोल्नबाट रोक्न सक्छ।
VPN बिना बुकमेकरको साइटमा पहुँच गर्ने प्रयास गर्नेहरूले आफूलाई असक्षम वा अवरुद्ध पनि पाउन सक्छन्।
दोस्रो चरण - VPN स्थान छान्नुहोस्
धेरै जसो VPN ले तपाइँलाई तपाइँको आदर्श सर्भर स्थान छनौट गर्न दिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ कुनै हिचकी बिना दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, सुरक्षित विकल्प क्यानाडा हुनेछ। एकचोटि तपाईंले यसलाई सेट अप गरेपछि, तपाइँको ब्राउजर पुन: सुरु गर्नुहोस् र तपाइँको दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न 1xBet आधिकारिक वेबसाइटमा एक पटक फेरि जानुहोस्।
निस्सन्देह, यदि तपाईं क्यानाडा वा पूर्वी युरोपका केही देशहरूबाट हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्राविधिक रूपमा 1xBet लगइन प्रक्रिया पूरा गर्न VPN हरू प्रयोग गर्नुपर्दैन। जे होस्, तिनीहरू आफ्नो गोपनीयताको बारेमा चिन्ता गर्ने मानिसहरूका लागि उपयोगी छन्, र धेरै मानिसहरूले त्यस उद्देश्यका लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छन्।
तेस्रो चरण - दर्ता फारममा अनुरोध गरिएका विवरणहरू भर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले वेबसाइटमा जानुभयो भने, माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको हरियो ” रेजिस्ट्रेसन ” बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
यसले फोन, इ-मेल, सामाजिक सञ्जाल, र एक क्लिक मार्फत दर्ता गर्ने जस्ता धेरै विकल्पहरूको साथ एक सीधा मेनुलाई संकेत गर्दछ।
फोन मार्फत दर्ता
फोन मार्फत उपलब्ध सबैभन्दा सरल र सुरक्षित विधिहरू मध्ये एक हो। तपाईंले सूचीमा आफ्नो देशको कोड खोज्नुपर्छ र आफ्नो फोन नम्बर राख्नुपर्छ। पछि, तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको प्रमाणिकरण कोड घुसाउनुहोस्। प्रवर्धनात्मक कोड भएका मानिसहरूले केही दर्ता बोनसहरूको आनन्द लिनको लागि तिनीहरूलाई यहाँ राख्न बिर्सनु हुँदैन। जे भए पनि, प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनको लागि सबै आवश्यक जानकारी भरेपछि “दर्ता गर्नुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्।
चौथो चरण - आफ्नो दर्ता पूरा गर्नुहोस् र सट्टेबाजी सुरु गर्नुहोस्
दर्ता फारम पूरा गरेपछि, 1xBet ले स्वचालित रूपमा सिर्जना गरिएको ग्राहक आईडी र पासवर्ड उत्पन्न गर्दछ र पठाउँछ। यो पासवर्ड तुरुन्तै परिवर्तन गर्न र आफ्नो व्यक्तिगत खाता अझ सुरक्षित गर्न दुई-कारक प्रमाणीकरण सक्षम गर्न एक उत्कृष्ट विचार हुनेछ।
एकचोटि तपाईंले गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो पहिलो जम्मा गरेपछि, तपाईंले तुरुन्तै वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ र धेरै फरक खेलहरू र खेलकुद कार्यक्रमहरूमा बाजीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरू छन्, त्यसैले धेरै मानिसहरूलाई रकम थप्न कुनै समस्या हुनुपर्दैन।
प्रत्यक्ष लिङ्क संग 1xBet पहुँच
उल्लेख गरिएझैं, केही देशहरूले तपाईंलाई कुनै समस्या बिना आधिकारिक वेबसाइट पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। यी अवस्थाहरूमा, 1xBet लगइन र दर्ता प्रक्रिया सामान्य भन्दा छिटो छ किनकि तपाईंले VPN स्थापना गर्ने भाग छोड्न सक्नुहुन्छ, तर यो अन्यथा लगभग समान छ।
जब तपाइँ VPN प्रयोग गरेर ल्याइएको सुरक्षा र अन्य बोनस सुविधाहरू छोड्नुहुन्छ जुन तपाइँ अन्यथा मोबाइल संस्करणमा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, यो अझै पनि एक मूल्यवान विकल्प हो। केवल 1xBet वेबसाइटमा सिधै जानुहोस् र VPN प्रयोग गरेर दर्ताको तेस्रो चरणबाट दर्ता सुरु गर्नुहोस्, जहाँ तपाईंले आफ्नो मनपर्ने खाता प्रमाणिकरण विधि, देश, र रुचाइएको मुद्रा छनोट गरेपछि सबै आवश्यक जानकारी भर्नुहुन्छ।
1xBet मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत दर्ता
1xBet सट्टेबाजी कम्पनी कसरी एन्ड्रोइड वा आईओएस उपकरणहरूमा यसको मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्न प्रयास गर्छ भनेर परिचित धेरै मानिसहरू। आखिर, यसले खेलकुद प्रेमीहरू र अन्य ग्राहकहरूलाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि द्रुत रूपमा कार्यमा प्रवेश गर्न दिन्छ।
तिनीहरू रेलमा, पबमा, काममा, वा अन्य खेलकुद साइटहरूमा पनि हुन सक्छन्। आधिकारिक 1xBet एपको साथ, नयाँ खेलाडीहरूले केही अतिरिक्त बोनसहरूको मजा लिँदा सजिलै बाजी राख्न सक्छन्। तपाईंले विभिन्न एन्ड्रोइड र आईओएस उपकरणहरू, जस्तै टिभी बक्सहरू, ट्याब्लेटहरू र स्मार्टफोनहरूबाट यो कार्यक्रम पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
मोबाइल संस्करणको प्रयोगकर्ता इन्टरफेसले पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप मोड दुवैलाई समर्थन गर्दछ, त्यसैले तपाईंले आफूलाई सबैभन्दा बढी अपील गर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, कार्यक्रम नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ, मुख्य वेबसाइटमा भर्खरको घटना परिणामहरू र पुरस्कारहरू जस्तै।
यद्यपि, तपाइँ कसरी कार्यक्रम मार्फत नयाँ खाता सिर्जना र लग इन गर्न सक्नुहुन्छ? पहिले, तपाईंले आफ्नो मनपर्ने उपकरणमा अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्छ।
पहिलो चरण - 1xBet एप स्थापना गर्दै
1xBet एप प्राप्त गर्न, तपाईंले पहिले यसको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुपर्छ र डाउनलोड प्रम्प्टको साथ लिङ्क फेला पार्नु पर्छ। सौभाग्य देखि, यो कम्प्युटर प्रतिमा बाहेक, माथि बायाँ कुनामा सजिलै उपलब्ध छ।
त्यहाँ तपाईंसँग दुबै यन्त्रहरूको लागि कार्यक्रम डाउनलोड गर्ने विकल्प छ। एन्ड्रोइडका लागि, यो प्रत्यक्ष .apk फाइल लिङ्क हो। iOS को लागि, यो iTunes Store वा एप स्टोरको लिङ्क हो।
एन्ड्रोइडमा 1xBet एप स्थापना गर्दै
एन्ड्रोइडमा प्रोग्राम स्थापना गर्ने प्रयास गर्ने मानिसहरूलाई एप स्थापना गर्ने अनुमति छैन भनी सन्देश आउन सक्छ। यद्यपि, यो अपेक्षित छ। केवल सेटिङहरूमा जानुहोस् र “अज्ञात एपहरू स्थापना गर्नुहोस्” खोज्न खोजीमा ट्याप गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यसलाई क्लिक गरेपछि, तपाईंले कार्यक्रम स्थापना गर्न अनुमति दिन चाहनुभएको स्रोत चयन गर्नुहोस्।
केही पुराना यन्त्रहरूमा “अज्ञात स्रोतहरू” अन्तर्गत सुरक्षा खण्डमा त्यो विकल्प हुन सक्छ, जहाँ तपाईंले यसलाई मात्र खोल्नु पर्छ। तपाईंले त्यसो गरेपछि, तपाईं 1xBet एन्ड्रोइड स्थापनालाई अन्तिम रूप दिन सक्नुहुन्छ।
iOS मा 1xBet एप स्थापना गर्दै
सौभाग्य देखि, कार्यक्रम स्थापना यी यन्त्रहरूमा महत्त्वपूर्ण रूपमा सीधा छ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको खाता सिर्जना गर्न र लगइन प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि एप स्टोरबाट प्रोग्राम डाउनलोड गर्नु हो। तपाईंले त्यसो गर्न सक्षम हुनको लागि एप्पल आईडी सेट अप गर्न आवश्यक छ, तर यो केहि चीज हो जुन iOS ले तपाईंलाई पहिलो पटक आफ्नो फोन सेटअप गर्दा तपाईंलाई गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले धेरै मानिसहरूसँग एउटा हुनुपर्छ। यदि होइन भने, सेटिङहरूमा जानुहोस् र iTunes र एप स्टोरहरूमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यहाँ यसलाई कसरी सेट अप गर्ने भनेर बताउँछ।
दोस्रो चरण - दर्ता
तपाईंले सफलतापूर्वक मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गरेपछि, तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्न र लग इन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले नै वर्णित विधिहरू मध्ये कुनै एक प्रयोग गरेर खाता सिर्जना गर्नेहरूले मात्र यस सेवाको फाइदाहरूको आनन्द लिनको लागि साइन इन गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाइँसँग छैन भने, एप खोल्नुहोस् र शीर्ष बायाँ कुनामा ह्याम्बर्गर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। “रेजिष्ट्रेसन” मा क्लिक गर्नुहोस् र प्रक्रिया उस्तै भएकोले VPN प्रयोग गरेर 1xBet मा दर्ता गर्ने तेस्रो चरणबाट जस्तै अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न र तपाईंसँग भएको कुनै पनि प्रोमो कोडहरू प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्, किनकि यसले तपाईंलाई भारी बोनसको आनन्द लिन सक्छ।
तेस्रो चरण - फाइदाहरूको आनन्द लिनुहोस्
1xBet कार्यक्रममा एक आधुनिक, न्यूनतम डिजाइन छ जुन छिटो लोड हुन्छ, पुराना यन्त्रहरूमा पनि। यसको साथ, तपाइँ कुनै पनि खेल खेल्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँले चाहेको कुनै पनि शर्त राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको लेआउट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई सबैभन्दा रुचि भएका खेलहरूको सिंहावलोकन र बाधाहरू प्रदर्शन गर्न र तपाईले हेर्न नचाहेकोलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक, 1xBet ले पहिलो पटक सदस्यहरूलाई अतिरिक्त “स्वागत बोनस” प्रदान गर्दछ, तर यसका लागि तपाईंले जम्मा गरेको हुनुपर्छ। सौभाग्यवश, भुक्तान प्रणालीहरू एपमा मुख्य वेबसाइटमा जस्तै विशाल छन्, त्यसैले यो कुनै समस्या हुनु हुँदैन।
यस बुकमेकरले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गर्ने अर्को फाइदा भनेको नि:शुल्क बेट्स प्राप्त गर्ने अवसर हो। यसले बाजी लगाउनेहरूलाई अतिरिक्त जम्मा गर्नबाट बच्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ, किनकि यसले उनीहरूलाई थप जित्ने मौका दिन्छ।
1xBet मा दर्ता र लग इन गर्ने उत्तम तरिका के हो?
वर्णन गरिएका सबै विधिहरू सरल छन्, त्यसैले एउटालाई उत्तम भन्न गाह्रो छ। जे होस्, त्यहाँ जहिले पनि एउटा मात्र व्यवहार्य विकल्प छ यदि तपाईंले जियो-ब्लकको कारण धेरै व्यक्तिहरूले वेबसाइट पहुँच गर्न असमर्थ हुन सक्छन् भन्ने विचार गर्नुहुन्छ। त्यो हो, 1xBet लगइन र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न VPN प्रयोग गर्दै।
जबकि विधि साइट पहुँच गर्न र एक खाता सीधै सिर्जना भन्दा अलि लामो छ, यसले सबैका लागि काम गर्दछ र सुरक्षाको अतिरिक्त डिग्री प्रदान गर्दछ। जे भए पनि, यो 1xBet संग साइन अप गर्न एक सहज र छिटो तरिका हो।
यदि तपाईंलाई आफ्नो खाता सिर्जना गरेपछि लग इन गर्न कुनै समस्या छ भने, तपाईंले मद्दतको लागि अनलाइन साइट र मोबाइल एप मार्फत ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि “पासवर्ड बिर्सनुभयो?” थिच्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ बनाउन अगाडि बढ्नुहोस्।
1xBet लगइन - निष्कर्ष
1xBet ले सट्टेबाजी सुविधाहरूको एक विशाल दायरा प्रदान गर्दछ जसले धेरै betters चकित र जानकारीको साथ केही हदसम्म अभिभूत छोड्छ। यसबाहेक, यस साइटमा खेलकुददेखि क्यासिनो खेलदेखि क्रिकेट, कबड्डी र अन्य खेलकुद कार्यक्रमहरूसम्म बाजी लगाउने थुप्रै तरिकाहरू छन्।
यो सट्टेबाजी कम्पनीले तपाइँको पैसा लेनदेनहरू सुरक्षित रूपमा ह्यान्डल गर्दछ चाहे तपाइँ अनलाइन साइटमा हुनुहुन्छ वा कार्यक्रम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसले रेफरल लिङ्कसँग काम गर्ने सम्बद्ध मार्केटिङ व्यापार उद्यम मार्फत साझेदार बन्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ।
यस बुकमेकरमा रुचि भएका ग्राहकहरूले कुनै पनि सूचीबद्ध लगइन र दर्ता प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सक्छन् जबसम्म तिनीहरू भू-अवरोधित देशबाट छैनन्। यस अवस्थामा, उनीहरूले सजिलैसँग VPN प्रयोग गरेर 1xBet लगइन प्रक्रिया सुरक्षित रूपमा पूरा गर्न सक्छन्।